Dagaalyahano ISIS katirsan oo weeraray tuulada Dasaan ee gobolka Bari - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandDagaalyahano ISIS katirsan oo weeraray tuulada Dasaan ee gobolka Bari
Dagaalyahano ISIS katirsan oo weeraray tuulada Dasaan ee gobolka Bari. [Sawirka: Archive]
Garoowe-(Puntland Mirror) Dagaalyahano ISIS katirsan ayaa weeraray tuulada Dasaan ee gobolka Bari, sida sarkaal dowladda ah uu warsidaha Puntland Mirror u xaqiijiyay.
Sarkaal dowladda Puntland katirsan oo codsaday in aan magaciisa la sheegin, ayaa Puntland Mirror u sheegay in weerarku uu dhacay shalay galab oo Sabti ahayd markii tobonaan maleeshiyo ISIS katirsan ay weerareen tuulada.
Sida Sarkaalku sheegay, dagaalyahanada ayaa bakhaarada kuyaala tuulada ka qaatay raashin waxayna dib ugu noqdeen deegaan u dhow tuulada Dasaan.
Kismaayo-(Puntland Mirror) Maamul goboleedka Jubbaland ayaa ciidamo boqolaal ah u diray deegaamo ay dhawaan ku dagaalameen dad xoolo dhaqato ah iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam sidoo kale ah taliyaha ciidamada Jubbaland ayaa [...]